Kulan Khibrad Wadaag Iyo Is Barasho Ayaa Loo Qabtay Haween Weynaha Siyaasadda Ku Jira Ee Somaliland – SONSAF
Kulan Khibrad Wadaag Iyo Is Barasho Ayaa Loo Qabtay Haween Weynaha Siyaasadda Ku Jira Ee Somaliland
Kulan Is barasho iyo Khibrad wadaag ah oo ay ka soo qayb galeen haween weynaha siyaasadda ku jira sida haweenka xisbiyada iyo haweenka kale ee daneeya arrimaha siyaasadda ayaa maanta ka qabsoomay Hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa.
kulankan oo ay soo agaasintay Dalladda SONSAF ayaa waxa furitaankii hadal ka jeediyay guddoomiyaha Dalladda SONSAF Mudane Anwar Cabdiraxmaan Warsame, waxaanu soo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankan, isaga oo sheegay in ay muhiim u arkeen in dumarkii ka sharraxnaa gobollada kala duwan ee dalka iyo haweenka kaleba ay is weydaarsadaan waayo-aragnimadii ay ka dhaxleen doorashadii dalka ka dhacday iyo caqabadihii ay la kulmeen.
Guddoomiyaha ayaa intaa ku daray in sidoo kale ay dumarku halkan isku la wadaagi doonaan hannaankii doorashadu ay u dhacday haddii ay noqoto dhinaca sharciyada doorashooyinka iyo haddii ay noqoto dhanka ololaha, si loo fahmo maxaa ka khaldamay dumarka xilligii doorashada lagu jiray iyo waxa ay u baahan yihiin in ay dib u sixid ku sameeyaan.
Agaasimaha Dalladda haweenka ee NAGAAD Nafiisa Yuusuf oo iyaduna madasha hadal dheer ka jeedisay ayaa tilmaamay in baahiyaha dumarku qabaan ee dhinaca nolosha ama qoyska la ogaan karo uun marka dumar tagaan miiska talada laga gooyo, taasina ay tahay arrinta ay marwalba dadaalka ugu jiraan ka dallad ahaan in ay dumarka ka caawiyaan. Waxaanay intaa ku dartay in Dalladda NAGAAD ay in badan u xusul duubnayd in ay dumarku helaan KOOTO ay dumarku iyaga dhexdooda ku tartamaan, balse labadii doorasho ee u danbeeyayba laga saaray.
Dumarka ka socday xisbiyada Qaranka iyo siyaasiyiintii kale madaxa bannaanaa ayaa iyaguna si waafi ah u falanqeeyay khibraddii ay ka heleen doorashadii dalka ka dhacday iyo in ay hadda siyaasad ahaan u bisil yihiin in ay doorasho gali karaan, waxaanay u mahadnaqeen Dalladdaha SONSAF iyo NAGAAD oo ay yidhaahdeen waxay noo fidiyeen taageero buuxda wakhtigii lagu jiray doorashada